About Us - Qingdao uqinise Oomatshini Co., Ltd
Qingdao uqinise Machinery Co., Ltd yasekwa ngo-1997 emva kweminyaka phantse-20 uphuhliso oluqhubekayo, inkampani iye yaba ebanzi eliphambili nkampani irabha zeplastiki umatshini entsimini kunye textile entsimini umatshini. Le nkampani iye Iqela kuyilo kwiklasi yokuqala eqinisekisa umatshini le nkampani kukuba kwindawo kakhulu ekhulile China, amanye matshini uhlala kwindawo engaphambili ehlabathini liphela. Le nkampani iye zonke iintlobo zezixhobo processing ngqo eliphezulu iiseti ngaphezulu kwama-200.
Ngokupheleleyo sibe mveliso ezintlanu e China mpumalanga, kunye iyonke mechanistes abangaphezu kwamakhulu amathathu baqeqeshwe kakuhle kunye nabasebenzi.
Thina abasebenzi QC ekhethekileyo zonke workshop, Okwangoku kwinkqubo yonke imveliso, yonke umsebenzi QC kumsebenzi wakhe wokugqibela inyathelo. Thina abasebenzi yemveliso kakhulu oluzinzileyo nobungcali. Bonke hlobo ngo nemigubasi yabo.
Thina iqela kakhulu zobungcali kwamanye amazwe. Abazi ukuba nje ulwimi lwasemzini kunye nenkqubo urhwebo lwangaphandle kakuhle kakhulu, kodwa bayazi kwakhona umatshini kakuhle kakhulu, bayazi ishishini kakuhle kakhulu.
Ngokufutshane, inkampani yethu imbali, uye iqela top uyilo level, abasebenzi abaqeqeshiweyo kakuhle, yaye injineli njengezininzi iqela elizinikeleyo kwiintengiso.
Qingdao uqinise Machinery Co., Ltd win udumo lwayo ngokubona izivumelwano kunye nokugcina izithembiso ngokubonelela koomatshini Obusemagqabini ubunjani, kwaye best inkonzo kumazwe professional nasemva inkonzo sentengiso. umatshini kweNkampani ngokubanzi kumazwe kulo lonke ihlabathi.
Sinqwenelela ukuba basebenzisane ngokuqinileyo kunye nabathengi zehlabathi abanomdla koomatshini zethu kwizinga eliphezulu.
Wamkelekile Qingdao uqinise Machinery Co., Ltd.